အချစ်က ကျန်းမာရေး ကောင်းစေလား? – For her myanmar
အချစ်က ကျန်းမာရေး ကောင်းစေလား?
Posted on December 21, 2018 December 21, 2018 Author Wathun	Comment(0)
မသိဘူး.. ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း ချစ်မယ် 😛
အချစ်နဲ့ ကျန်းမာရေးဟာ တကယ်ကို ဆက်စပ်မှု ရှိပါတယ်။ အတိအကျ သက်သေမပြနိုင်သေးပေမဲ့ လေ့လာချက်တွေအရ ကောင်းမွန်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတွေဟာ မပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေထက် ကျန်းမာရေး ပိုကောင်းတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကြာရှည်တည်မြဲနေတဲ့ အချစ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတွေက ပိုပြီး ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်တတ်ကြပါတယ်တဲ့..
အချစ်လို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ချစ်သူချင်း ချစ်တဲ့ အချစ်မျိုးသာ မဟုတ်ဘဲ –
သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းချစ်တဲ့ အချစ်မျိုးတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အချစ်က ကျန်းမာရေးအတွက် ဒီလို အကျိုးပြုပါသတဲ့…
၁။ ဆေးရုံ ဆေးခန်း သွားရတဲ့အကြိမ် နည်းတယ်။
သုတေသနပြုချက်တွေအရ ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတွေဟာ မပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေထက် ဆေးရုံဆေးခန်းသွားရတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် နည်းလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆေးရုံတက်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်တောင် ဆေးရုံတက်ရတဲ့ ရက် တိုပါတယ်တဲ့။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတော့ အဖြေရှာလို့ မရသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုသူတွေက စိတ်ချမ်းသာနေတတ်တဲ့အတွက် ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုက ခန္ဓာကိုယ်ကို အထောက်အကူ ပြုတယ်လို့ ယူဆလို့ရသလို နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေက ကောင်းမွန်တဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေကိုလည်း ပိုရနိုင်တာကြောင့်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်လည်း လွယ်လွယ်နဲ့ မကျတတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
၂။ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်နှုန်းကို လျော့ကျစေတယ်။
သုတေသနပြုချက်တွေအရ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ခံစားရတဲ့သူတွေက စိတ်ကျရောဂါဖြစ်နှုန်းနည်းပါတယ်တဲ့… ဒါ့အပြင် မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုကိုလည်း လျော့ကျစေနိုင်ပါသေးတယ်။
Related Article >>> သွားပိုးပေါက်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သတိထားရမည့် လက္ခဏာ (၉) ရပ်
၃။ သွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ကောင်းမွန်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးရှိတဲ့သူတွေက တခြားသူတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် သွေးဖိအား ပုံမှန်ရှိနေတတ်ပြီး သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းထားနိုင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
၄။ စိတ်တိုခြင်း၊ စ်ိတ်ဆိုးခြင်းတို့ကိုလည်း လျော့နည်းစေတယ်။
ကြင်နာနွေးထွေးတဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေက စိတ်တို၊ စိတ်ဆိုးမှုတွေအစား ကြည်နူးမှုတွေ၊ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေကို ပိုပြီး ခံစားရပါတယ်။
၅။ နာကျင်မှု ဒီဂရီကို လျော့ကျစေပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ သူ နှစ်သိန်းနီးပါးကို သုတေသန ပြုလုပ်ချက်တွေအရ အိမ်ထောင်ပြုထားတဲ့သူတွေဟာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်းတွေကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်တဲ့..
၆။ စိတ်ဖိစီးမှု နည်းတယ်
ကိုယ့်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရှိနေရင်တောင် ကိုယ့်ဘေးက ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူ၊ ကိုယ်က ချစ်တဲ့သူတွေက မျှဝေခံစားပေးတတ်ကြတာကြောင့် အထိုက်အလျောက်တော့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ပြေပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ နွေးထွေးနေသူတွေက စိတ်ဖိစီးမှုနည်းတယ်လို့ ဆိုကြတာပေါ့…
လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ အများကြီးလုပ်ထားပြီး သိလာရတဲ့ အချက်ကတော့ အိမ်ထောင်ပြုထားတဲ့ သူတော်တော်များများက အသက်ရှည်ရှည် နေထိုင်ရလေ့ ရှိပါတယ်တဲ့။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ ရှစ်နှစ်ကြာလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနအရ အိမ်ထောင် မရှိသူ ၅၈% ဟာ အိမ်ထောင်ရှိသူတွေထက် သေဆုံးနှုန်းပိုများပါတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဆိုတော့… “ချစ်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို များစွာ အထောက်အကူ ပြုပါသည်” လို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပေါ့…
အချစ်တွေပွားများပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
မသိဘူး.. ကောငျးကောငျး မကောငျးကောငျး ခဈြမယျ 😛
အခဈြနဲ့ ကနျြးမာရေးဟာ တကယျကို ဆကျစပျမှု ရှိပါတယျ။ အတိအကြ သကျသမေပွနိုငျသေးပမေဲ့ လလေ့ာခကျြတှအေရ ကောငျးမှနျတဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး တဈခုကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ သူတှဟော မပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူတှထေကျ ကနျြးမာရေး ပိုကောငျးတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကွာရှညျတညျမွဲနတေဲ့ အခဈြရေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ သူတှကေ ပိုပွီး ကနျြးမာရေး ကောငျးမှနျတတျကွပါတယျတဲ့..
အခဈြလို့ ဆိုတဲ့နရောမှာ ခဈြသူခငျြး ခဈြတဲ့ အခဈြမြိုးသာ မဟုတျဘဲ –
သူငယျခငျြး အခငျြးခငျြးခဈြတဲ့ အခဈြမြိုးတှလေညျး ပါဝငျပါတယျ။
အခဈြက ကနျြးမာရေးအတှကျ ဒီလို အကြိုးပွုပါသတဲ့…
၁။ ဆေးရုံ ဆေးခနျး သှားရတဲ့အကွိမျ နညျးတယျ။
သုတသေနပွုခကျြတှအေရ ပြျောရှငျတဲ့ အိမျထောငျရေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ သူတှဟော မပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူတှထေကျ ဆေးရုံဆေးခနျးသှားရတဲ့ အကွိမျအရအေတှကျ နညျးလရှေိ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဆေးရုံတကျခဲ့ရတယျဆိုရငျတောငျ ဆေးရုံတကျရတဲ့ ရကျ တိုပါတယျတဲ့။ ဘာကွောငျ့ဒီလိုဖွဈရတယျဆိုတာတော့ အဖွရှောလို့ မရသေးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီလိုသူတှကေ စိတျခမျြးသာနတေတျတဲ့အတှကျ ဒီစိတျခမျြးသာမှုက ခန်ဓာကိုယျကို အထောကျအကူ ပွုတယျလို့ ယူဆလို့ရသလို နောကျတဈမြိုးအနနေဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ အိမျထောငျရေး ပိုငျဆိုငျထားသူတှကေ ကောငျးမှနျတဲ့ ဂရုစိုကျမှုတှကေိုလညျး ပိုရနိုငျတာကွောငျ့လို့လညျး ဆိုပါတယျ။ စိတျဓာတျလညျး လှယျလှယျနဲ့ မကတြတျတော့တဲ့အတှကျကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါသေးတယျ။
၂။ စိတျကရြောဂါဖွဈနှုနျးကို လြော့ကစြတေယျ။
သုတသေနပွုခကျြတှအေရ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ ခံစားရတဲ့သူတှကေ စိတျကရြောဂါဖွဈနှုနျးနညျးပါတယျတဲ့… ဒါ့အပွငျ မူးယဈဆေးသုံးစှဲမှုကိုလညျး လြော့ကစြနေိုငျပါသေးတယျ။
Related Article >>> သှားပိုးပေါကျနှငျ့ ပတျသကျပွီး သတိထားရမညျ့ လက်ခဏာ (၉) ရပျ
၃။ သှေးပေါငျခြိနျကိုလညျး ကောငျးမှနျစပေါတယျ။
ကောငျးမှနျတဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးရှိတဲ့သူတှကေ တခွားသူတှနေဲ့ ယှဉျရငျ သှေးဖိအား ပုံမှနျရှိနတေတျပွီး သှေးပေါငျခြိနျကို ထိနျးထားနိုငျတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
၄။ စိတျတိုခွငျး၊ စိတျဆိုးခွငျးတို့ကိုလညျး လြော့နညျးစတေယျ။
ကွငျနာနှေးထှေးတဲ့ ခဈြခွငျးတဈခု ပိုငျဆိုငျထားသူတှကေ စိတျတို၊ စိတျဆိုးမှုတှအေစား ကွညျနူးမှုတှေ၊ စိတျကနြေပျမှုတှကေို ပိုပွီး ခံစားရပါတယျ။
၅။ နာကငျြမှု ဒီဂရီကို လြော့ကစြပေါတယျ။
အရှယျရောကျပွီးတဲ့ သူ နှဈသိနျးနီးပါးကို သုတသေန ပွုလုပျခကျြတှအေရ အိမျထောငျပွုထားတဲ့သူတှဟော ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ခါးနာခွငျးတှကေို ပိုမိုခံနိုငျရညျရှိပါတယျတဲ့..
၆။ စိတျဖိစီးမှု နညျးတယျ
ကိုယျ့မှာ စိတျဖိစီးမှုတှေ ရှိနရေငျတောငျ ကိုယျ့ဘေးက ကိုယျ့ကိုခဈြတဲ့သူ၊ ကိုယျက ခဈြတဲ့သူတှကေ မြှဝခေံစားပေးတတျကွတာကွောငျ့ အထိုကျအလြောကျတော့ စိတျဖိစီးမှုတှေ ပွပြေောကျသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ယဘေုယအြားဖွငျ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာနဲ့ နှေးထှေးနသေူတှကေ စိတျဖိစီးမှုနညျးတယျလို့ ဆိုကွတာပေါ့…
လလေ့ာဆနျးစဈမှုတှေ အမြားကွီးလုပျထားပွီး သိလာရတဲ့ အခကျြကတော့ အိမျထောငျပွုထားတဲ့ သူတျောတျောမြားမြားက အသကျရှညျရှညျ နထေိုငျရလေ့ ရှိပါတယျတဲ့။ ၁၉၉၀ ခုနှဈမှာ ရှဈနှဈကွာလုပျခဲ့တဲ့ သုတသေနအရ အိမျထောငျ မရှိသူ ၅၈% ဟာ အိမျထောငျရှိသူတှထေကျ သဆေုံးနှုနျးပိုမြားပါတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။
ဆိုတော့… “ခဈြခွငျးသညျ ကနျြးမာရေးကို မြားစှာ အထောကျအကူ ပွုပါသညျ” လို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပေါ့…
အခဈြတှပှေားမြားပွီး ပြျောစရာကောငျးတဲ့ နရေ့ကျလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။
Tagged Affect, good, Health, KKMM, love, Relationship, Research
Posted on February 19, 2017 February 19, 2017 Author Christina Rosy
ညတိုင်းသောက်အိပ်ရုံနဲ့ ဗိုက်ခေါက်တွေကို ရှင်းထုတ်ပေးမယ့် သခွားရှားစောင်းလက်ပက် အဆီကျဖျော်ရည် ပြုလုပ်နည်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုခေတ်က crop topလေးတွေခေတ်စားနေပေမယ့် ကိုယ်က ဗိုက်ခေါက်ထူလပြစ်နဲ့မို့ သူများတွေ ၀တ်ပြီးလန်းနေတိုင်း သွားရည်ကျရုံမှတစ်ပါး။ ၀ိတ်ချမယ်ဆိုပြီး အစားလျှော့ပါတယ်။ အစာအာဟာရ မမျှဖြစ်ပြီး ဆေးချိတ်လိုက်ရလို့ ပိန်သာပိန်သွားတယ်။ ဗိုက်ခေါက်က ကျမလာဘူး။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုပြီး ဗီဒီယိုတွေ ကူးပြီး မနက်စောစော ထလုပ်ပါတယ်။ နဂိုကမှ အိပ်ပုပ်အခံရှိတော့ တစ်ပတ်ပဲလုပ်ဖြစ်တယ်။ နောက်နေ့တွေကျ ခေါ..ခလူး အဲ့ဒါဆို ဒီတစ်သက် ဗိုက်ခေါက်ကျမှ ကျပါ့မလားလို့ စိတ်ပူနေသူတွေအတွက် သခွားရှားစောင်းလက်ပက်ဖျော်ရည်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဒီဖျော်ရည်ကို ညအိပ်ခါနီးသောက်ပေးရုံနဲ့ ၀မ်းဗိုက်တစ်ဝိုက်က အဆီတွေကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာ ဖျက်ချပေးပါတယ်။ အိပ်ပျော်နေချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်အလုပ်လုပ်နှုန်းက သာမန်အချိန်ထက် ပိုနှေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သခွားရှားစောင်းလက်ပက်ဖျော်ရည်သောက်ပြီး အိပ်တဲ့အခါမှာတော့ ဇီဝဖြစ်စဉ်လည်ပတ်နှုန်းကို တိုးတက်စေတာကြောင့် အိပ်နေတဲ့ […]
ရာသီမလာခင် လူသတ်ချင်သော ပျိုမေများ
Posted on March 9, 2017 March 9, 2017 Author Christina Rosy
မိန်းကလေးတိုင်း ဖြစ်တတ်တဲ့ အလေ့အထလေးတွေပါ။ ယောက်ျားလေးတွေသိထားလည်း ကိုယ့်ချစ်သူကို ဂရုစိုက်နိုင်တာပေါ့။
Posted on March 5, 2017 June 17, 2017 Author
ဝိတ်ချချင်တယ် အချိန်ပေးပြီးလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်နိုင် အစားမလျှော့နိုင်ဖြစ်နေရင်တော့ ဖတ်သင့်ပြီ….
ဘဝအတွက် အလိုအပ်ဆုံး မေးခွန်းများ